एजेन्सी, ६ माघ । अहिले थ्रेडिङ नगर्ने महिला सायद कमै होलान् । महिलाहरुले आफुलाई स्मार्ट लुक्स दिन थ्रेडिङ गर्ने गर्दछन् । कुनै विवाह महोत्सवमा जान आघि महिलाले ब्युटी पार्लरमा गएर थ्रेडिङ गर्ने गर्दछन् । तर थ्रेडिङ गरीसकेपछि थ्रेडिङ गरेको भागमा कहिलेकाहिँ रातो हुने, सुन्निने र चिलाउने जस्ता समस्या देखिने गर्छ । तपाईले पार्लरबाट आएपछि गर्ने केहि गल्तीहरूका कारण यस्तो हुने गर्छ । त्यसकारण आज हामी तपाइँलाई थ्रेडिङ गरीसकेपछि के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा केहि जानकारी दिनेछौं ।
१. मेकअप नगर्नुहोस्
कहिलेकाहिँ हामी व्यस्त हुन्छौ र समय नभएका कारण पार्टीमा जानुभन्दा केहि समय पहिले पार्लर जाने गर्छौ। यदि तपाइँ पनि यस्तो गर्नु हुन्छ भने आफ्नो बानी बदल्नुहोस् । किनभने यस्तो पार्टीमा जाने मौका घरीघरी मिल्दैन त्यसैले मेकअप बिना जाने कुरै हुदैन र तपाईलाई यस्तो समयमा मेकअप गर्नाले जलन हुन सक्छ । सधै थ्रेडिङ गरेको ३-४ घण्टा पछि मात्र मेकअप गर्नुहोस् । खासगरी आखाको मेकअपमा यो कुरालाई बिषेस ध्यान राख्नुहोस् ।
२. कुनै पनि फ्रेग्नेन्स् प्रोडक्सनहरुको प्रयोग नगर्नुहोस्
३. तातो पानी वा बाफबाट टाढा रहनुहोस्
थ्रेडिङ गर्नु भन्दा पहिले तपाईले साहन सक्ने पानीको बाफ लिन सक्नु हुन्छ। यसले तपाईको आइब्रोलाई नरम बनाउछ र थ्रेडिङ गर्न सजिलो पार्दछ । तर थ्रेडिङ गरिसकेपछि कम्तीमा दुई घन्टासम्म तातो पानी र बाफबाट टाढा रहनुहोस् । थ्रेडिङ गरेपछि तपाईको छाला निकै नै संवेदनशील हुन्छ र तातो पानीको प्रयोग गर्नाले रातो हुने समस्या सम्भावना बढाउँछ।
४. थ्रेडिङ गरेको ठाउँमा धेरै चोटी नछुनुहोस्
५. तुरुन्त घाममा ननिस्किनुहोस्
थ्रेडिङ गरेपछि, यदि तपाई तुरुन्तै घाममा जानुहुन्छ भने UV किरणले तपाईको संवेदनशील छालामा प्रतिक्रिया देखाएर रातोपन र जलनको समस्या उत्पन्न गर्नेछ। त्यसैले सधैभरी थ्रेडिङको ३- ४ घण्टा पछि मात्र घाममा निक्लिनुहोस् ।
रसुवाको याङ्याङ पाखामा मालवाहक ट्रक दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते